▷ Ahoana no hijerena maimaimpoana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020 | Androidsis
Ahoana ny fomba hijerena maimaimpoana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
Aaron Rivas | | About us
ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020 Eo akaiky eo fotsiny izy ireo ary avo ny andrasana manodidina ity hetsika fanatanjahantena lehibe ity. Ary izany dia, ao anatin'ny andro vitsivitsy, hotontosaina any Japon izy ireo, miaraka amin'ny zava-drehetra tafiditra amin'ny lanonana iray manan-danja sy lehibe toy izany.
Atleta sy mpanao fanatanjahantena an'arivony no handray anjara, hisolo tena firenena am-polony ary hamela ny sainan'izy ireo avo. Efa manana ny fahavononany manokana i Espana, ka afaka manantena vokatra tsara isika amin'ity taona ity. Raha te-hijery maimaimpoana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020 ianao, eto dia lazainay aminao ny fomba.
1 Rahoviana izy ireo no manomboka ary rahoviana no hifarana?
2 Azonao atao ny mijery maimaimpoana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
3 Solony hafa hitadiavana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
3.0.1 RTVE (Radio Espaniola sy Televiziona)
4 Espana amin'ny Lalao Olaimpika
4.1 Fanatanjahan-tena sy fifehezana izay handraisan'i Espana anjara
4.2 Nanao ahoana ny niafaran'i Espana tamin'ny Lalao Olaimpika teo aloha
5 Atleta lehibe Espaniola izay tsy handray anjara amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
6 Fanatanjahantena vaovao 5 no nampiana ho an'ny Lalao Olaimpika
Rahoviana izy ireo no manomboka ary rahoviana no hifarana?
Ny Lalao Olaimpika ao Tokyo dia tokony natao tamin'ny taona nanatontosana azy, izay farany, teo anelanelan'ny 24 Jolay sy 9 Aogositra. Saingy, noho ny areti-mandringana, ny komity mpikarakara dia tsy maintsy nanemotra azy mandraka ankehitriny, satria misy fepetra tsara kokoa manerantany amin'ny fampandrosoana ireo hetsika ireo. Ankehitriny ireo Hanomboka ny 23 Jolay izy ireo ary hifarana amin'ny 8 Aogositra. Mandritra izany fotoana rehetra izany dia hisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy fanatanjahantena am-polony, ary i Espana, toy ny firenena maro hafa, dia hanatrika ny maro amin'ireo.
? Manandrama volana maimaim-poana: Aza adino na inona na inona amin'ny Lalao Olaimpika tsindrio eto. Ho hitanao ny fitsapana rehetra sy ny fanatanjahantena manokana maro hafa (F1, basikety, baolina kitra…) tsy misy fanoloran-tena.
Eny, ny hetsika dia tsy hanana mpihaino toy ny tamin'ny tranga teo aloha, zavatra iray izay mampiseho fa ny olana ateraky ny COVID-19 dia mbola misy ankehitriny, na dia teo aza ny fihenan'ny vaksinina samihafa misy eto amin'izao tontolo izao sy ireo antony hafa izay nampihena be ny areti-mifindra.
Azonao atao ny mijery maimaimpoana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
Hisy fomba maro hahitana ny Lalao Olaimpika ao Tokyo 2020. Na izany aza, ny ankamaroany dia karama, mazava ho azy. Vitsy dia vitsy no afaka ary, miaraka amin'izay, manana kalitao tsara.
Ny safidy tsara indrindra dia amin'ny alàlan'ny DAZN, izay aloa, fa manolotra volana fitsarana maimaimpoana nefa tsy maharitra, izay azo foanana mora foana amin'ny fotoana rehetra, mba hialana amin'ny fandoavana ny fandoavana.
Amin'ny alalàn'io no halefa ny hetsika. Mandritra izany fotoana izany, ireo fanatanjahan-tena sy ligy hafa eran'izao tontolo izao koa dia nalefa, noho izany dia lavorary ny fampahalalana momba izay rehetra mitranga momba ny fanatanjahan-tena, atleta ary izay rehetra hitranga eo amin'ny tontolon'ny taranja lalao Olaimpika Tokyo 2020, ary koa ireo ady totohondry tena ilaina, ligin'ny baolina kitra. malaza indrindra (Copa del Rey, Premier League, sns), ligin'ny basikety, fanadihadiana maro, seho isan-kerinandro ary maro hafa.
Ny fomba fandoavam-bola dia anisan'ny malaza indrindra. Azonao atao ny mampiasa ny carte de crédit na debit anao Visa, MasterCard, JBC na American Express. Azonao atao ihany koa ny misafidy Paypal, Google Pay, fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Apple na ny fampiasana karatra fanomezana DAZN.
Ny vidin'ny fisoratana anarana isam-bolana dia 9,99 euro. Raha te hifanaraka amin'ny DAZN mandritra ny herintaona ianao dia afaka misafidy ny handoa vola 99,99 euro, izay handika ny fandoavam-bola isam-bolana amin'ny 8,33 euro.
Solony hafa hitadiavana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
Raha ny DAZN dia iray amin'ireo safidy ankafizinao indrindra mahita ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020, misy ihany koa ny maro hafa izay mety ho tena tsara.
RTVE (Radio Espaniola sy Televiziona)
Voalohany indrindra dia manana RTVE (Televiziona Radio Espaniola) izahay, iray amin'ireo fitaovana lehibe eto amin'ny firenena hijerena ny lanonana sy ny fanatanjahantena maro izay hatao amin'ireo Lalao Olaimpika ireo. Maimaimpoana izany ary handrakotra ny lanonana fanokafana sy fanokafana, ary koa fanatanjahantena, taranja ary hetsika ara-panatanjahantena maro izay hatao mandritra ny hetsika.
Movistar dia iray amin'ny haino aman-jery izay mandrakotra hetsika ara-panatanjahantena ho an'i Espana. Izany dia noho izany Safidy tsara hafa ny mahita ny zava-drehetra mitranga amin'ny sehatra fanatanjahantena, tsy amin'ny Lalao Olaimpika ihany, fa amin'ny hetsika hafa koa, ary koa ny baolina kitra iraisam-pirenena, ligin'ny basikety matihanina ary fanatanjahantena maro hafa.
Eo koa ny Vodafone, izay manolotra ny mpanjifany Eurosport Player ny mety hijerena ny Lalao Olaimpika 2020. Ny zavatra tsara amin'ity safidy ity dia manana fantsona roa izy, dia ny Eurosport 1 sy Eurosport 2, ka tsy ho diso anjara amin'ny hetsika ara-panatanjahantena rehetra ianao, mainka fa ny fandraisana anjara any Espana.
Olympics.com dia iray amin'ireo sehatra tranonkala lehibe manarona ny Lalao Olaimpika, manomboka amin'ny vaovao ka hatramin'ny fahalianana ary, mazava ho azy, fanatanjahantena mivantana sy mivantana. Sary, horonan-tsary ary maro hafa koa no aseho eto amin'ity pejy web ity. Safidy iray hafa tsara hanarahana ny Lalao Olaimpika. tamin'ity fanontana ity.
? Manandrama volana maimaim-poana DAZN ary aza adino na inona na inona amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2021
Espana amin'ny Lalao Olaimpika
Firenena mihoatra ny 200 no handray anjara amin'ity fanontana olympika ity amin'ny hetsika 306 misy taranja fanatanjahantena 42. Espana, toy ny isan-taona, ho avy, miaraka amina atleta sy atleta 321, ny 184 amin'ireo dia lehilahy ary 137 ny vehivavy. Saúl Craviotto, miaraka amin'ny mpilomano matihanina Mireia Belmonte, no ho mpitondra ny sainam-pirenena amin'ny hetsika fanokafana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020.
Saúl Craviotto sy Mireia Belmonte dia isan'ny atleta espaniola manana loka sy traikefa be indrindra. Izany no antony nisafidianana azy ireo hisolo tena ny saina amin'ny hetsika. Samy nahavita nahazo medaly maro tamin'ny Lalao Olaimpika teo aloha. Ary ilay voalohany no nandray anjara tamin'ny fanontana farany ny Lalao Olaimpika, nanomboka tamin'ny 2008, izay nokarakaraina tany Beijing, Sina.
Amin'ny lafiny Belmonte, nandray anjara tamin'ny fanontana olympika marobe ihany koa izy, saingy tsy tamin'ny taona 2008. Manampy antsika amin'ny fanatrehany izany tamin'ny taona 2012, izay natao tany United Kingdom, London, ary 2016, izay natao tao Rio. De Janeiro , Brezila.
Fanatanjahan-tena sy fifehezana izay handraisan'i Espana anjara
Ny Espaniola an-jatony izay handray anjara amin'ny hetsika ara-panatanjahantena amin'ity lanonana ity dia haparitaka ao 29 amin'ireo fanatanjahantena 35 sy taranja samihafa, izay ahitantsika ireo malaza indrindra, toy ny lomano, bisikileta, basikety, baolina kitra, fefy, gymnastika, fitsambikinana, taekwondo, polo rano, tenisy (latabatra koa), volley, zana-tsipìka ary maro hafa.
Ny sasany amin'ireo solontena marobe izay hanandrana hampiakatra ny anaran'ny firenena dia ahitana an'i Damián Quintero Capdevila sy Sandra Sánchez Jaime (karate), Óscar Husillos (atletisma), Jon Rahm (golf), Pablo Abián (badminton), Laura Bechdejú (artistic), Gabriel Escobar (ady totohondry), Alberto Ginés López (miakatra), David Valero Serrano ary Jofre Cullell Estapé (bisikileta), Albert Torres Barceló (lalana), Beatriz Ferrer-Salat (mitaingina soavaly - akanjo) ary Jessica Vall (milomano), ankoatry ny maro hafa anarana bebe kokoa.
Nanao ahoana ny niafaran'i Espana tamin'ny Lalao Olaimpika teo aloha
Tamin'ny andiany farany tamin'ny Lalao Olaimpika Rio de Janeiro, izay tao amin'ny 2016, Espaniola dia nahavita nanangona medaly 16, ka ny 7 dia volamena, 4 volafotsy ary 6 varahina, ka nahatanteraka andro iray nahomby kokoa noho ny tamin'ny 2012 tany London, United Kingdom, na dia teo aza ny zava-misy fa tamin'ireto Lalao Olaimpika ireto dia nisy medaly 17 ny medaly medaly iray hafa; Izany dia satria ireo tamin'ny 2017 dia vita amin'ny volamena, amin'ny ankapobeny, raha tany Angletera dia zara raha 3 izy ireo.
Toy izany koa, Nahomby hatrany i Espaina ho iray amin'ireo firenena nanana medaly betsaka indrindra ary nahitana vokatra tsara tamin'ny Lalao Olaimpika. Noho izany, antenaina fa hanao an'ity fanontana ity ihany na ho tsara kokoa aza. Avo ny fanantenana, ary azo inoana fa ny rakitsoratry ny firenena, izay medaly 22 azo tamin'ny Lalao Olaimpika (zavatra nitranga tao Barcelona tamin'ny 1992), dia azo nihoarana tamin'ity taona ity, araka ny fampanantenan'ny lisitra.
Atleta lehibe Espaniola izay tsy handray anjara amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
Iray amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena manandanja indrindra eran'izao tontolo izao, Espaniôla, ary koa ireo firenena mpandray anjara hafa, mazàna dia miantso ny solontenany tsara indrindra hiady amin'ny ady sarotra sy hahazoana ny voninahitra Olaimpika. Na izany aza, Amin'ity taona ity dia misy atleta sy atleta maromaro avy any Espana izay tsy ho eto Tokyo, Japon, amin'ity 2021 ity.
Ny sasany amin'izy ireo dia misy ilay mpiaro Sergio Ramos, izay ao anatin'ny ekipa frantsay PSG (Paris Saint Germain) ankehitriny. Tsy handray anjara amin'ny ekipa baolina kitra Olaimpika izy. Tsy hanao toy izany koa i Ferrán Torres, izay milalao amin'ny ekipa anglisy Manchester City, sy Brahim Díaz ary Borja Mayoral, izay milalao ho an'ny Real Madrid sy Roma, any Serie A (ligin'ny baolina kitra italianina).
Amin'ny lafiny iray, Tsy nahomby tamin'ny sokajy gymnastika gadona i Espana, ka ireo mpilalao toa an'i Inés Bergua, Ana Arnau, Valeria Márquez ary ny hafa dia hailika. Izany dia vokatry ny fandraisana anjaran'ny firenena tsy dia nahafa-po tamin'ny fanatanjahan-tena ity.
Tsy handeha ho any Tokyo koa i María Torres, izay sangany amin'ny karate, tsy toa an'i Sandra Sánchez sy Damián Quintero, izay nahavita nanao ny mari-pahaizana tamin'ny anaran'i Espana, soa ihany.
Fanatanjahantena vaovao 5 no nampiana ho an'ny Lalao Olaimpika
Surfing, Karate, baseball / softball (miverina ireto roa ireto), fiakarana ara-panatanjahantena ary skateboard Ho hitantsika izy ireo amin'ity taona ity amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020. Ireo dia efa nankatoavina ary, noho izany, maro ny mpankafy liana te-hahita an'ity fanontana ity, satria izy ireo dia iray amin'ireo hetsika fanao indrindra eto an-tany ny fiankinan-doha amin'ny fanatanjahan-tena, izay tsy dia lehibe toy ireo efatra hafa voalaza-.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ahoana ny fomba hijerena maimaimpoana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
WhatsApp multi-fitaovana, tena? Izahay dia manamarina azy !!
Fampiharana tsara indrindra hanaovana sary an'i Anime amin'ny Android